पोखरा लेखनाथ महानगरमा १७ मेयर र ११ जनाको उपमेयरमा उम्मेदवारी :
पोखरा, वैशाख २० । देश कै ठुलो महानगरपालिका पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको प्रमुखका लागि १७ जनाले उमेदवारी दिएका छन् ।
वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दल र स्वतन्त्रबाट गरि १७ जनाले मेयर र ११ जनाले उपमेयरमा उमेद्वारी दिएका छन् । उम्मेदवारी दर्ताका लागि दलहरु बाजागाजा सहित निवाचन कार्यालय पुगेका थिए । पोखरा महानगरको मेयरमा १७ जना र उपमेयरमा ११ जनाको उम्मेदवारी दर्ता भएको निवाचन कार्यालय कास्कीले दिएको छ । पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको मेयरमा १७ जना र उपमेयरमा ११ जनाको सम्मेदवारी दर्ता भएको छ ।
मेयरको लागि नेपाली कांग्रेसबाट रामजी कुँवर , एमालेबाट मान बहादुर जिसी, माओबादी केन्द्रबाट विश्वप्रकाश लामिछाने, राप्रपाबाट गीता गुरुङ, संघिय समाजवादी फोरमबाट हुम गुरुङ, अखण्ड नेपाल पार्टीको तर्फबाट मोती गिरी, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमबाट अमन विक्रम थापा र स्वतन्त्र उमेदवार रेशम राज पन्थीले उम्मेदावरी दर्ता गरेका छन् ।
त्यस्तै उपमेयरमा कांग्रेसबाट सरस्वती गुरुङ, एमालेकी मञ्जुदेवि गुरुङ, माओबादी केन्द्रबाट गोमा ढकाल, राप्रपाबाट रमेश खत्री, नयाँ शक्ति पार्टीबाट लक्ष्मी खाती परियार र अखण्ड नेपाल पार्टीकी गोमा कुमारी थापा रायमाझी, संघीय समाजबादीबाट लक्ष्मी परियार, स्वतन्त्र कल्पना थापा, चन्द्रबहादुर कार्की, सिरोज कोइराला, राष्टिय जनमोर्चाबाट दालकुमारी खत्री उमेदवारी दर्ता गराएका छन् । उपमेयर सहित महानगरका ३३ वटै वडाका उमेदवारहरु एक साथ मनोनयन स्थल पुगेका थिए ।
ठूला पार्टी कांग्रेस, एमाले, माओबादी केन्द्र, राप्रपा र संघिय समाजवादी फोरम दलबल सहित मनोनयन दर्ता गर्न गएका थिए ।
Published on: 2017-05-02 | Read More
मनाङको नारफू गाउँपालिकामा काग्रेसका उमेद्वार निर्विरोध निर्वाचित :
बैशाख २० । हिमाली जिल्ला मनाङको नारफू गाउँपालिकामा मिङ्मा छिरिङ लामा गाउँपालिका प्रमुखमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । नार गाउँपालिका १, नारगाउँका ४३ वर्षीय लामा बैशाख ३१ गतेको पहिलो चरणको निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत मुलुककै गाउँपालिकामध्येबाट पहिलो निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उनीबाहेक कसैको उम्मेदवारी नपरेपछि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका लामा निर्विरोध भएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्रोतले बतायो । यद्यपी निर्विरोध निर्वाचत घोषणा भने गरिएको छैन । १ देखि ५ वडासम्म रहेको नारफू गाउँपालिकाको सवै वडा निर्विरोध भएको छ । वडा नं. १ देखि ३ सम्म कांग्रेस र वडा नं. ४ र ५ मा स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार निर्विरोध भएका हुन् ।
उपप्रमुखमा २ जनाको उम्मेदवारी परेपछि अहिले मिलाउने प्रयास भइरहेको छ । उपाध्यक्षमा कांग्रेसबाट फूर्पा जोम्पा लामा र स्वतन्त्रबाट कोन्जो तेन्जिङ लामाले उम्मेदवारी दिएका थिए । ‘एकजनाको उम्मेदवार बन्ने योग्यता देखिँदैन । अर्कोलाई निर्विरोध बनाउने प्रयास भइरहेको छ । कुरा मिल्दैछ’ स्रोतले भन्यो ।
सम्भवतस् मुलुकको सवैभन्दा कम मतदाता संख्या भएको नारफू गाउँपालिकामा ३ सय ६२ मतदाता रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय मनाङले जनाएको छ ।
डीभी चिट्ठाको नतिजा सार्वजनिक, कसरी थाहा पाउने नतिजा ?
वैशाख २० । अमेरिकी डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) २०१८ को नतिजा मंगलबार (हिजो)राति सार्वजनिक गरेको छ । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले नेपाली समयअनुसार मंगलबार (हिजो) राति ९ बजेर ४५ मिनेटमा डीभी चिट्ठाको नतिजा प्रकाशित भएको छ ।
दूतावसको जानकारीअनुसार सन् २०१६ को अक्टोबर ४ देखि नोभेम्बर ७ तारिखसम्म अनलाइन आवदेन दिएकाहरुको नामावली चिट्ठामार्फत् सार्वजनिक गर्न लागिएको हो । दूतावसले डीभी विजेताहरुलाई इमेल व अरु कुनै माध्यममार्फत् कुनै जानकारी नगराउने उल्लेख गर्दे कुनैपनि शुल्कको लागि अनुरोध नगर्ने जानकारी गराएको छ ।
EDV-2018 result नतिजा सम्बन्धि जानकारी यसै Electronic Diversity Visa Lottery पेजमा हेर्न सकिने छ https://www.dvlottery.state.gov/ESC/ | नतिजा जाँच गर्न डिभी भर्दा दिइएको कन्फरमेसन नम्बर आवश्यक पर्नेछ भने डी भी परे/नपरेको र अमेरिका जाने योग्यता सेप्टेम्बर ३०, २०१८ सम्म हेर्न सकिनेछ|
घाईतेको उपचार नर्गने अस्पताल र डाक्टरको लाइसेन्स खारेजीको माग बिरोध ¥याली
पोखरा, ११ वैशाख । ‘सरकार ४० लाखमा मानवीय संवेदनाको शिक्षा पनि दिलाउ’ लगायतका नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेर युवाहरु उभिएका थिए । उनीहरुले ‘पहिले मानव अनि डाक्टर बन’, ‘तिम्रा आन्दोलन ठूलो कि घाईतेको ज्यान ?’, ‘डाक्टरको काम जीवनदान कि मृत्यु ?’, ‘उपचार नगर्ने डाक्टर हुँदैनन्’ जस्ता नाराहरु सेतो कागजमा स्पष्ट देखिन्थे ।
बिरोध स्वरुप कालो रंगको ब्यानरमा पीडाले छटपटाईरहेका घाईतेको उपचार नगर्ने संवेदनहीन मनिपाल शिक्षण अस्पताल र डाक्टरको लाइसेन्स खारेजीको माग सहित बिरोध ¥याली लेखिएको थियो ।
आईतबार साँझ मानवअधिकार चोकमा भेला भएर पोखरामा सक्रिय फेसबूक ग्रुप वी आर वान (डब्लूएओ) ले यसरी विरोध जनाएको थियो । शनिबार मुक्तिनाथ दर्शन गरेर फर्कंदा बस दुर्घटनामा परेर घाइते भएकालाई उपचार नगरेपछि युवाहरु यसरी बिरोधमा उत्रेका हुन् । मानवअधिकारचोक, चिप्लेढुंगादेखि बिपीचोक हुँदै महेन्द्रपुलसम्म ¥याली गरेका थिए ।
ग्रुपका संयोजक सूर्य तिमिल्सिनाले त्यति टाढाबाट ल्याएका गम्भिर बिरामीहरु आधा घण्टासम्म अस्पताल परिसरमा छट्पटाउँदा समेत अस्पताल र चिकित्सकले आफ्नो धर्म बिर्सिएको गुनासो गरे । ‘जस्तोसुकै आन्दोलन भएपनि आकस्मिक विपद्मा परेर ल्याईएका बिरामीलाई फर्काउनु अत्यन्त खेदजनक कार्य हो । ज्यान भन्दा ठूलो आन्दोलन हुन सक्दैन’ – उनले भने– ‘मनिपाल अस्पताल बेलाबेलामा यस्तै घटनामा मुछिने गर्छ । अस्पताल व्यवसाय मात्र होईन । मानवीय दायित्व पनि पूरा गर्नुपर्छ ।’
तीर्थयात्राको क्रममा मुक्तिनाथ बाट फर्कदै गर्दा कागबेनी नजिकै बस दुर्घटना भएको थियो । पाँच जनाको मृत्यु भएको थियो भने ३० जना घाईते भएका थिए । आधा घाईतेलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उपचारका लागि पोखरा ल्याईएको थियो ।
Published on: 2017-04-23 | Read More
सुगर रोगबाट मुक्त हुने यो हो अचुक ओखती
यदि तपाई मधुमेह पीडित हुनुहुन्छ भने अब आत्तिनु पर्दैन । तपाईले घरेलु उपायहरू अपनाएर नै आफ्नो स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सक्नु हुन्छ । यदि गुलियो चिजहरूको सेवनका कारण तपाईलाई मधुमेहले पीडित बनाएको हो भने तपाईले बेलाको पातलाई प्रयोग गर्न सक्नु हुनेछ । यस रोगबाट छुटकारा पाउन तपाईले १५ वटा बेलको पातलाई ३० ग्राम पानीमा मिलाएर पिस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि ३ या ४ कालो मरिचको दालाई धुलो हुने गरी पिसेर पिसिएको बेलको पातसँग मिश्रण बनाइ त्यसलाई एउटा सफा कपडाले छानेर आएको रसलाई सेवन गर्नुहोस् ।
यसप्रकारले बेलको पात पिसेर पिनाले तपाई केही महिनामा नै यो रोगबाट मुक्त हुनु सक्नु हुनेछ । त्यसैगरी बेलको पत्रलाई अन्य तरिकाले प्रयोग गरे पनि यस रोगका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । तपाईले ६ वा ७ वटा बेलको पात, कालो मरिचको दाना, तुलसीको पात र निमको पातलाई एकै ठाउँमा राखेर एकदमै मसिनो हुने गरेर मजाले पिँधेर एक गिलास पानीसँग युक्र मिश्रण सेवन गर्नुहोस । हरेक दिन यसप्रकारको घोल पिउनाले तपाई छिट्टै मधुमेह रोगबाट मुक्त हुन सक्नु हुनेछ ।
स्थानीयको दवावपछि दुई महिना देखि बन्द मनिपाल अस्पताल सञ्चालनमा
पोखरा ११ बैशाख । चिकित्सकको आन्दोलनका कारण पछिल्लो दुई महिनादेखि बन्द पोखराको मनिपाल शिक्षण अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको छ ।
स्थानीयको ब्यापक दवावपछि पोखरा महानगरपालिका वडा न. ११ फूलवारी स्थित मनिपाल शिक्षण अस्पतालका आन्दोलकारी चिकित्सक र अस्पताल प्रशासन बीच सहमति भएको र सोमवार विहान ८ वजे देखि अस्पतालका सम्पूर्ण सेवाहरु सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ ।
नेपाली चिकित्सकले विभिन्न माग राखि गत फागुन १ गते देखि आन्दोलन गरेका थिए । आन्दोलनको कारण अस्पतालको ओपिडि देखि इमरजेन्सी सम्मका सेवाहरु ठप्प भएका थिए । शनिवार मुस्ताङमा भएको बस दुर्घटनाका गम्भिर १५ घाइतेलाई हेलिकप्टर मार्फत उपचारका लागि ल्याइएकोमा उपचार गर्न नसक्ने भन्दै अन्यत्र पठाएपछि मनिपाल अस्पताल र त्यहाका चिकित्सकको चर्को आलोचना भएको थियो ।
स्थानीय फुलबारी क्लबले आन्दोलनरत चिकित्सक र प्रशानलाई बार्ताका लागि दवाव दिएपछि आइतवार भएको वार्तामा अस्पतालका सम्पूर्ण सेवा सोमवारदेखि सुरु गर्ने सहमति भएको हो । दुर्घटनाका गम्भिर घाइतेलाई उपचार गर्न नमानेको भन्दै स्थानीयवासीले शनिबार साझँ अस्पतालको गेटमा तालाबन्दी गरी आइतवार विहान आन्दोलनमा रहेका चिकित्सकलाई समेत नियन्त्रणमा लिएका थिए । स्थानीयको दवाव र चौतर्फी चर्को आलोचना खेपेपछि अन्नत अस्पतालको सेवा पुन सुरु हुन लागेको हो ।